Blog action day 2009: Miresaka momba ny fiovaovan’ny toetr’andro ireo tetikasa vatsian’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2009 8:53 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Italiano, English
Androany [15 oktobra] no Blog Action Day ary kendren'ity hetsika isan-taona ity ny hanambarana ny mpamaham-bolongana manerantany hanoratra lohahevitra tokana mba hampahafantarana sy hanentanana izao tontolo izao hiresaka ilay lohahevitra. Misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Rising Voices ary no nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka entinay aminareo etoana ny fantina avy amin'izany.
Iray amin'ny tanjon'ny FOKO izay vatsian'ny Rising Voices ny hahatonga ny ny olom-pirenena eto Madagasikara ho singa miasa eo anivon'ny tontolo ny [maitso] manokana izay ahiana [ho potika]. Tahina avy ao amin'ny FOKO Blog Club eto Antananarivo, Madagascar no manoratra:
Androany no Blog Action Day momba ny fiovaovan'ny toetr'andro, bolongana anarivony no manao soroka miara-milanja amin'izany mba hanaitra sy hanery ny tsirairay sy nympitondra eto amin'izao tontolo izao handray haingana ny andraikitra mety sy mifandraika amin'izany. Misy lanjany lehibe ity tolona ity rehefa zary lasa tsy fantatra intsony izay ho avin'ny taranaka. Tsy dia manantena loatra ny fiantraikany mivantana avy amin'ny fahazotoana an-tserasera toy itony aho raha ny eto Madagasikara saingy rehefa nahita ny fomba nanampian'ny famahanam-bolongana an'i Kamba aho dia nanao hoe nahoana kosa moa no tsy ho tahaka izany koa amintsika. Te-hilaza amin'izao tontolo izao isika fa hitandrina.
Ary dia navoitrany amin'izay ny fihetsika tokony hatao:
Tokantrano malagasy firy moa no mampiasa arina na kitay handrahoan-tsakafo? 80-90%? Tsy mahatakatra angovo hafa isika ao anatin'ny fotoana lavalava. Ary eto no tena ilana fandraisana andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra ambony.
Patrick avy ao Toamasina, Madagasikara: Ampitadiavana toerana mety hambolena hazo
Lyva, mpikambana hafa ay ao amin'ny FOKO no manoratra [fr] avy any Antsirabe :
Mino izahay fa tokony ho tafiditra ao anatin'ity olana ity avokoa ny rehetra satria tsy fantsatsika intsony hoe vanimpotoana inona moa no diavintsika izao. Ohatra, Lohataona izao sa fahavaratra? Niova vdia niova ny maripana satria tsy nisy ny ririnina. Midina hatrany amin'ny 3°C ny maripana rehefa lohataona nefa mahatratra 35°C na mihoatra rehefa fahavaratra. (dika milina)
Ariniaina no miteny izay tokony hataon'ny olona tsy hamotehana ny tontolo iainana:
Heveriko fa ny tena olana eto Madagasiakra dia sahirana mitady izay hohaniny isan'andro ny mponina. Lasa tia kely tsy mahalala afa-tsy ny ho antsika isika avy eo. Adinontsika ny mpiara-monina sy ny taranaka.
Manantena aho fa hanaitra olona anarivony…anapitrisany… fitondrana maro…firenena mahantra… firenena manankarena… sy ny hafa koa ity fiaraha-mientan'ny mpamaham-bolongana ity, ary hiaraka isika hamonjena ny tany. Ny azokoa atao aloha izao dia ny amboleko hazo [ho ahy].
Théophile Kouamouo avy amin'ny Abidjan Blog Camps tetikasa Ivoariana no manoratra ny resadresaka nifanaovany tamina mpanao politika Ivoariana 70 taona:
Avy any avaratr'i Cote d'Ivoire ny tenany, niresaka momba ny fahazazany izy, ary nanatri-maso ny nahatritra ny renirano roa namakivaky ny tany ambanivohiny. Hitany fa nihabetsaka ny vovondrano lalina ary nihavitsy ny fangadiana marivo hatsakana rano. Iza moa no tompon'andraikitra ary voina sa ozona no fahitan'ny tantsaha izany? ny tany hay mihamahazo vahana, ny fiovaovan'ny toetr'andro, ary eo ihany koa ny politikam-pambolena hanaovana azy ho asan'orinasa izay mitaky fitarihandrano, samy zava-doza avokoa ireo rehetra ireo rehefa afaka fotoana maharitra.
Niresaka izany tamim-pandresen-dahatra ilay mpanao politika, ary manahy ny ho avy aza satria hitan'ny masony ny loza mitatao. (dika milina avy tamin'ny teny frantsay)
“Afrika no iray amin'ny toerana ianjadian'ny fiovaovan'ny toetr'andro indrindra,” hoy ny fampitandreman'i Théophile.
Manoratra [fr] i Cartunelo avy amin'ny Abidjan Blog Camps :
Amin'ny maha-web developer ny tena dia misy ny asa tsotra azo tao hamonjena ny planeta sy ahafahantsika web developers hanao asa miara-mirindra amin'ny tontolo iainana eto Abidjan:
1. Vonoina ny solosaina: mampiasa izay fiatoana kely fandaniana indrindra.
2. Tsoahina avokoa ny tsaidrianaratra rehetra amin'ny alina
3. Mampiasa takamoa misakaiza amin'ny tontolo iainana
Ny adihevitra momba ny fiovaovan'ny toetr'andro manokana moa dia natsangan'ny iray hafa vatsian'ny Rising Voices. Nomad Green no mitarika ny olo-pirenena Mongol hanapariahana ao an-teorana sy ivelan'ny firenena ny olan'ny tontolo iainan'ny fireneny. Vakio ny bolongany hahalalanao ny fahavitrihany hampiatoana ny fiharatsian'ny tontolo iainana ao Mongolia.
Tantaran'ny Cote d'Ivoire farany
22 Oktobra 2020Mediam-bahoaka
22 Febroary 2020Afrika Mainty